Madatopinfo – Page 9 – Un site d'actualités nationales et internationales
MINISITRY NY SERASERA TEO ALOHA, ROLLY MERCIA : Manahy mafy amin’ny coronavirus efa eny Antanimora ny fianakaviany Ny hamisavisana ny ratsy ahitana ny soa ! Araka ny tsiliontsofina ary manenika amin’ireo tambazotran-tserasera sy ny haino aman-jery maro ao amin’ny Renivohitr’i Madagasikara dia efa ahiana misy valanaretina coronavirus...
FAO. UNE ALIMENTATION SAINE NE DOIT PAS ÊTRE UN LUXE POUR LES AFRICAINS Même avant l’apparition de la COVID-19, l’Afrique était déjà confrontée à une crise d’accès aux aliments sains et frais Article d’opinion par Abebe Haile-Gabriel, Sous-Directeur général et Représentant régional pour...
TSENA ANDRAVOAHANGY : Lasa nivarotra ravintsara sy sakafo ireo very asa sy ny mpivaro-damba « Tsy vitsy amin’ireo mpivaro-damba tonta sy vao ary ny very asa no nivadika nivarotra sakafo na ravintsara sy kininimpotsy, indrindra amin’izao fihobohana izao. » Hoy i Jean Richard Rakotomalala, lehiben’ny tsena...
Continuons de prier. Un médecin à Lombardie nous raconte: « Dans mon cauchemar le plus sombre, je n’aurais jamais pensé voir et vivre cette chose qui se passe ici dans
Hoy ny mpanao gazety namana iray, tsy azo atao ny makany am-piangonana fa tsy voafehy ny olompirenena miangona amin’ny varo-mora.
« Miasa mafy mba tsy hisy ny aina afoy ». Hoy ny Filoha Andry Rajoelina, raha nanomboka ny tafa izy ny alarobia
GARARAKA RANON-TSIRA NA VINAINGITRA HAMONOANA VALANARETINAAD EXPERIMENTUM ! Fanandramana sy sosokevitra hatrany. Efa natsidika omaly ny fiheverana ny fisotroana rano
Chine :1er cas coronavirus : 19 novembre 20193 mois aprèsPic de l’épidémie : 15 février France :1er cas coronavirus :